January 11, 2019 January 11, 2019 खबर खुराकLeaveaComment on बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तकी आमा श्रीमानबाटै कुटिइन्
कञ्चनपुर, २७ पाैष । बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तकी आमा दुर्गादेवी पन्त श्रीमान् यज्ञराजबाटै कुटिएकी छिन् । डिएनए परीक्षणका लागि प्रहरीलाई रगत दिएको र सरकारी राहत लिन खोजेको भन्दै श्रीमान्ले कुटेको दुर्गाले बताइन् ।
‘म भान्सामा भात पकाइरहेकी थिएँ । उनी (यज्ञराज) एक्कासि आएर मेरो घाँटी च्यापे । नसोधी रगत दिने ? राहत बुझ्न खोज्ने भन्दै कुटपिट गरे,’ दुर्गाले भनिन्, ‘घटना हुँदा दुवै छोरी स्कुल गएका थिए । भान्सामै लछारपछार गरेपछि म ज्यान जोगाउन उम्किएर बाहिर निस्किएँ ।’
निर्मलाको शवबाट निकालिएको भनिएको नमुना उनकै हो कि होइन यकिन गर्न दुर्गाले प्रहरीमा आफैँ निवेदन दिएकी थिइन् । बाबु–आमाको रगत परीक्षण गरेपछि नमुना निर्मलाको हो कि होइन भनेर प्रस्ट हुनेछ । सुरुमा प्रहरीले यज्ञराजसँग रगतको नमुना मागे पनि अस्वीकार गरेका थिए ।
दुर्गाले रगत दिएपछि उनी असन्तुष्ट बनेका थिए । यज्ञराजले अरूको इसारामा चलेको भन्दै कपाल भुत्ल्याउँदै आक्रमण गरेको दुर्गाले बताइन् । श्रीमानले खोसेको मोबाइल पछि प्रहरीले दुर्गालाई बुझाइदिएको थियो । निर्मलाका बुबा यज्ञराज र सौतेनी आमा लक्ष्मीले घरमा सल्लाह नै नगरी दुर्गाले अरूको उक्साहटमा रगत दिएको र राहत बुझ्न राजी भएको आरोप लगाएका छन् । राहत बुझे न्याय कमजोर हुने उनीहरूको तर्क छ । दुर्गाले भने न्याय पर्खिँदा–पर्खिँदा दुई छोरीमाथि पनि अन्याय हुने भएकाले उनीहरूको भविष्यका लागि राहत बुझ्न लागेको बताएकी छिन् ।
तीन तहका सरकारबाट जम्मा १८ लाख राहत घोषणा भएपछि यज्ञराजले आफ्नो पनि ऋण तिर्नुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । यही विषयले दुर्गा र यज्ञराज–लक्ष्मीबीच विवाद बढेको स्थानीय बताउँछन् । निर्मलाकी आमा दुर्गा दुई छोरी लिएर भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामस्थित घरमा बस्छिन् । बुबा यज्ञराज भने कान्छी श्रीमतीसँग बेग्लै बस्छन् ।
दुर्गाले भने आफूले जिन्दगीभर श्रीमान् र सौताबाट पीडा खेप्नुपरेको दुःखेसो पोखेकी छिन् । उनले भनिन्, ‘मैले दुई छोरीको भविष्य सोच्नुपर्दैन ? एउटी छोरीको न्यायका लागि लड्दालड्दै दुई छोरीको भविष्यको चिन्ताले मलाई सताउँछ । उनी (यज्ञ)बाट सहयोग होइन, पीडा मात्रै पाउँदै आएकी छु । मैले जिन्दगीभर श्रीमान् र सौताबाट पीडा खेप्नुपर्ने ?’ नयाँपत्रिकाबाट
Tagged निर्मला पन्त श्रीमानबाटै कुटिइन् दुर्गादेवी हत्या
स्थानीय सरकारको कर असुली : २ हजार रुपैयाँ राहत पाउन ५१० रुपैयाँको सिफारिस शुल्क !
June 4, 2018 खबर खुराक